App cusub: Gaaban Habka ugu fudud ee loo gaabin karo URL-yada | Laga soo bilaabo Linux
App cusub: Gaaban. Habka ugu fudud ee loo gaabin karo URL-yada
Sanadahan oo dhan waxaan sameeyay qoraallo badan. Qoraallo ii oggolaaday inaan rakibo baakado badan, qoraallo rakibid hagitaan leh, si otomatig ah u socodsiinta howlaha, codsiyada terminal ee ujeeddooyinka kala duwan, iwm ... laakiin, illaa iyo hadda, weligey tixgelin kama helin xulashada sameynta codsi waxoogaa ka sii daran, illaa hadda 🙂
Waan ku barayaa: Gaaban
- "Magaca: Gaabin (RC1)
- "Ujeedo: Gaabi URLka aan hadda soo guurineyno, taas oo ah, u beddelo wax gaaban sida: http://is.gd/hyd69
- "Miiska: Waxay ka shaqeysaa labada KDE, Xfce, Gnome, Unity iyo qorfe.
- »Habka isticmaalka: Marka cinwaanka dheer ee URL la koobiyeysto, waan jarjarnaa annagoo socodsiinayna dalabka gaabin.
° Foomka dilka No.1: Orod [Alt] + [F2], ayaan qornay gaabin waanan cadaadinaynaa [Gali].
° Foomka dilka No.2: Waxaan ku raadineynaa arjiga liiska menu (hoos ka daawo shaashadda)
° Foomka dilka No.3: Waxaan sidoo kale ku fulin karnaa adoo ku qoraya boosteejada gaabin.
- » Hore ayaan u fuliyay, hada waa maxay ?: Waxaan arki doonaa ogeysiis noo sheegaya URL-kan cusub. Adoo riixaya [Ctrl] + [V] ama guji midig + dhaji, wuxuu ku dhajin doonaa meesha aad rabto url horey loo goostay.
3 Sidee loo rakibaa?
Caqli gal maahan mid aad u adag ... sida aan hada sharaxay, waa inaad nuqul ka sameysaa URL-ka dheer, midka aad rabto inaad gooyso, u socodsiiso arjiga (soo gaabi) sida aad jeceshahay, tanna (gaabin) waxay horey u soo celin doontaa URL-ka horeyba la googooyay
Si kastaba ha noqotee, arjiga waxaa loo qorsheeyay in marka hore la hubiyo haddii kumbuyuutarku uu leeyahay internet, ka dib marka la hubiyo tan waxay isku dayeysaa inay jarto URL-ka.
Sidoo kale, haddii aadan nuqul ka sameysan URL sax ah (aan dhahno waad soo guurtay qoraalka halkii aad ka beddeli lahayd URL) arjiga ayaa kuu sheegi doona know
Halkan waxaan ku aragnaa arjiga ku jira liiska codsiyada (Tani waa sida ay ugu egtahay KDE, laakiin wali waxay ku sugnaan doontaa Gnome, Midnimo, iwm.):
Waa kuwan ogeysiisyo aad nagu soo laaban karto:
Sidee loo rakibaa?
Hadday adeegsadaan Debian, Ubuntu o sooyaal, waad soo degsan kartaa xirmada .DEB halkan ka:
Markaad soo dejiso, kaliya laba-guji dushiisa oo way rakibi doontaa.
Haddii ay isticmaalaan distro kale, ii sheeg midka ... si fiican ayaan isku dayi karaa inaan xirmo u sameeyo RPMsidoo kale cabdi_jareere waxaa laga yaabaa inay xirxiranto Archlinux, laakiin waan ku dhibay hehehe.
MAALIN: Way fiicantahay in la cadeeyo, in aanan ahayn barnaamij hehe, laakiin waxaan kuu balan qaadi karaa codsigan waxyeelleyn doonin nidaamkaaga.
Hagaag, uma maleynayo inay jiraan wax badan oo lagu daro.
Illaa iyo hadda dalabku maahan mid isku murugsan dhammaantiis, horumar badanna waa la sameyn karaa 🙂
Aad baan u jeclaan lahaa fikradahaaga, fikradahaaga, fikradahaaga, soo-jeedimahaaga iyo / ama dhaliishaada, waxaan ballan-qaadayaa inaan isku dayo inaan ka farxiyo qof walba oo aan kari karo, maxaa yeelay waan ku celinayaa, anigu iskuma arko inaan ahay barnaamij-bixiye
Salaan iyo mahadsanid wixii aad akhrisay waxan oo dhan.
PD: Waxaan haddaba ka fikirayaa inaan ka dhigo GUI yar oo aad u FUDUD, oo kuu oggolaanaya inaad eegto taariikhda URL-yada la gooyey, iyo sidoo kale goob yar oo aad ku gasho URL-ka aad rabto inaad gooyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » App cusub: Gaaban. Habka ugu fudud ee loo gaabin karo URL-yada
Oo nambarka isha ma la heli karaa? Pd: Codsiga waa mid xiiso leh. hambalyo
Haa dabcan, dalabku wuxuu ku hoos jiraa shatiga GPL. Xaqiiqdii, koodhka ilaha waa wax aan ka badnayn isla qoraalka socda (/ usr / bin / gaagaaban), waad iska hubin kartaa haddii aad jeceshahay.
Waad ku mahadsantahay waxa xiisaha leh 🙂
Waa markii iigu horreysay ee aan dadka kale wax u barnaamij u sameeyo, taas oo ah, aniga kaliya maahan aniga ^ - ^
to.ly, tinyurl.com, tiny.cc ...
Waxaan isku dayay goo.gl ... laakiin ma aanan helin wixii aan doonayay, iskama aanan dayin wax intaa ka badan si fudud maxaa yeelay is.gd horeba waxay iigu shaqeysay kun yaabab.
Wax kasta oo ka soo horjeeda isticmaalka waa.gd? ... O_o
Qaar badan oo gaagaaban url ayaa soo ifbaxay, qaar ka fiican kuwa kale, laakiin haddii aad u baahato labadan adeeg, wax ka wanaagsan ma jiraan inaad haysatid qoraal kuu gaar ah oo la rakibay, badiyaa bilaash sida kuwaaga ...
Ku jawaab zzulander
YOURLS waa wax aad u wanaagsan, xitaa waxaan iibsaday domain gaaban oo aan ku qaabeeyey adiga, laakiin maadaama aanan waligey wax faa'iido ah ka helin, waxay ku sii sugnaatay halkaas oo ay boodh ka aruurineysay. xD
Wax fikrad ah malahan waxaani waa hehe, laakiin marhoreba waxay iga dhigeen wax xiise leh 😀
Horey waan iskuday, sifiican ayey ushaqeysaa iting Sugitaanka GUI 🙂
Waxaan rajeynayaa in GUI uusan waqti dheer qaadan doonin, marka hore waxaan u sameyn doonaa KDE (Qt), ka dib waxaan isku dayi doonaa Xfce iyo / ama Gnome3, ka dibna waxaan ku tijaabin doonaa qorfe iyo Midnimo ... uff ... shaqo adag hahaha .
Waxaan arkaa inaadan dhigin LXDE laga yaabee LXDE-ka aan halkaan ku haysto inuu yahay kan dhibaatooyinka siiyay markii lagu tijaabinayay wakiilka gadaashiisa
koodhka isha si uu ula qabsado baahiyadayda XD
Koodhku wuxuu si cad ugu jiraa / usr / bin / gaabin 😀
Waxay u shaqeysaa sifiican! .Mahadsanid!
Ku jawaab gussound
Maaha inaad dhibto, laakiin miyaanay fududayn buug-yare?
Ku jawaab morpheus
Maya nin, dabcan adigu waxba iskama dhibeysid 🙂
Fikraddu waxay ahayd in la sameeyo codsi fudud, had iyo jeerna la horumarin karo, la dhigo fursado badan, shaqooyin, iwm. Runtii anigu barnaamij ma ihi, kaliya waxaan aqaanaa Bash ... marka sida iska cad waxaan doortay luqaddan.
Hadda maxaa diidaya inuu calaamadeeyo?
1. Ma ahan wixii aan doonayay, maxaa yeelay ma doonayo inaan ku tiirsanaado barnaamij dibadeed (biraawsar)
2. Aniga ma sameyn lahaa, sidaa darteed waan u fahmi waayey inta aan doonayo.
3. Iima oggolaan laheyn waxyaabo badan oo aan doonayo inaan sameeyo ... taariikh, GUI, xulashooyin, iwm.
Fikirkaagu ma ahan saaxiib xun, runti maahan, kaliya ma ahan wixii aan doonayay ^ - ^
Dhibaato badan ma noqon doontaa in lagu rakibo dhammaan qeybinnada? A .tar.gz malaha?
Si tan loo sameeyo, waa inaan dhammeeyaa sameynta qoraalka rakibaadda, oo lagu ogaanayo kala-soocida, ku rakibaysa ku-tiirsanaanta si otomaatig ah iyo sidoo kale rakibaysa Shortens 🙂
Waxaan codsanayaa, haddii ay noqon karto, RPM loogu talagalay OpenSuse (ama wixii RPM distro; P)
Isku day RPMkan: http://www.mediafire.com/?iuni6rhx93uco58
Waa isku mid .DEB, laakiin waxaa la beddelay Ajaanibta Aurosx.
Qalad kasta, ii soo sheeg 😀
Waad ku mahadsantahay xiisaha.
Barnaamijyadani waxay umuuqdaan kuwo aad ufiican, horeyba waxtar ayey uleedahay url aad u dhaadheer, ah · _ · ha isticmaalin qariib si aad ugu bedesho suugaanta rpm, markii iigu dambeysay ee aan ku sameeyo barnaamijyada ubuntu si aan ugu gudbiyo deynta, waan ka xishoodaa nidaamka oo dhan . barnaamijyada aan isticmaalay ayaa ahaa dhajinta waa taringa oo laga soo dhejiyaa barnaamijyadan, laakiin doqonnimo ma aanan arkin inay horey u laheyd xirmadeeda rpm, marka waan qabtay deynta oo waxaan u gudbiyay si shisheeye (fikrad xun: - /), markii ku rakibidda hiva halkii, arrinta ayaa fulinaysay. Dhamaan desktop-ka waa la tuuray (waqtigaas waxaan isticmaali jiray gnome shit xD) ka dib mar dambe ayaan dib u bilaabay ka dibna meelna kama aysan bilaabin aniga, dhammaantoodna waa barnaamijyo siman oo ku saleysan java iyo inaan horeyba java u rakibay sidoo kale: - / sidaa awgeed khibrad ahaan kuma talinayo in la isticmaalo xD shisheeyaha
Maaha in la nacdalo arjigaaga (: P), laakiin maxay yihiin xiriiriyeyaasha gaagaaban ee hadda loo adeegsado? Miyeysan Twitter horey u dilin iyaga t.co?
Waxaan ku tijaabin doonaa Fedora-kayga aniga iyo saaxiibkay!
Waa inaad rakibataa xclip kahor (wax ka beddelka rpm si ay u weydiisato iyada oo ku tiirsanaanta ay fiicnaan doonto). Haddii kale codsigu kuma habboona. (Tusaalaha iskuxirka aan sameeyay (degelkeyga) http://is.gd/uXDaqA )
SolusOS 2 ayaa laga yaabaa inay qashin ka dhigto Debian oo ay noqoto hooyo ku tiirsan PiSi
OpenSUSE 12.2 hadda waa la heli karaa !!!!